अमिताभ बच्चनको अगाडी राजकुमार राव, आलियाले हराईन श्रीदेवी र कंगनालाई! - BigulNews
अमिताभ बच्चनको अगाडी राजकुमार राव, आलियाले हराईन श्रीदेवी र कंगनालाई!
Posted on December 25, 2017 Author SG	Comment(0)
एजेन्सी, यो पटक पेटाको हटेस्ट शाकाहारी सेलीब्रिटी २०१७ को उपाधि जित्न त्यति सजिलो भने थिएन । उक्त कार्यक्रमको शाकाहारी सेलीब्रेटीको सूचीमा महानायक अमिताभ बच्चनको साथै शाहिद कपूर, सनी लियोनी, आर माधवन, विद्युत जामवाल, कंगना रनौत र श्रीदेवीको नाम समावेश गरिएको थियो । तर यस पालि भने आलिया र राजकुमार रावले उपाधि जितेका छन् । बलिउडमा आफ्नो उत्तम प्रदर्शनको लागि चिनिने दुवै कलाकार आलिया र राजकुमारलाई पेटा हटेस्ट शाकाहारी सेलीब्रिटी २०१७ को उपाधिबाट सम्मानित गरिएको छ ।
यस मौकामा पेटाको सहयोगी निर्देशक सचिन बंगेराले भने, ‘आलिया भट्ट र राजकुमार राव फिट एण्ड हट छन् । ‘ आफ्नो फ्यान्सको लागि उनीहरु राम्रो उदाहरण बन्दै गएका छन् । साथै राजकुमार राव र आलिया भट्टले उनीहरुलाई प्रेरित पनि गरेका छन् जो यस पर्यावरणमा परिवर्तनबाट आफूलाई प्रभावित हुन चाहन्छन् । साथै उपाधिको हकदार आलियाले भनिन,’ म शाकाहारी खाना मन पराउछु, स्वस्थ जिन्दगीको यहि सहि तरिका हो। ‘ उपाधिको विजेता यूटन स्‍टार राजकुमारले सोशल मी‍डियामा शेयर गर्दै लेखे,’ यो उपाधि मेरो लागि निकै अमुल्य छ । ‘
बहुप्रतिक्षित चलचित्र ‘कृ’ को ट्रेलर युट्युबको शिर्ष स्थानमा [हेर्नुहोस भिडियो]
Posted on December 17, 2017 December 17, 2017 Author SG
काठमाडौँ, बहुप्रतिक्षित चलचित्र ‘कृ’ को ट्रेलर गत शुक्रबार सार्वजनिक गरिएको थियो । सार्वजनिक भएको २ दिन नबित्दै चलचित्र ‘कृ’ को ट्रेलर युट्युबको शिर्ष स्थानमा पर्न सफल भएको छ। अभिनेता अनमोल केसी र अदिति बुढाथोकीको मुख्य भूमिका रहेको यो चलचित्र माघ २६ गते देशैभरको हलहरुमा रिलिज हुनेछ। यस चलचित्रमा मुख्य भूमिका रहेको अनमोललाई नयाँ अवतारमा देख्न सकिन्छ। चकलेटी नायकको रुपमा […]
यी अभिनेत्री जसलाई सामाजिक संजालमा मजाकको पात्र बनाइयो!
Posted on December 25, 2017 Author SG
एजेन्सी, जायरा वसीम पश्चात दंगल गर्ल फातिमा सना शेख पनि सोशल मीडियामा निकै चर्चामा आएकी छिन् । फातिमा जायराको झैँ कुनै विवादमा परेर वा हाइलाइट नभईकन उनि आफ्नो आईब्रोको कारणले चर्चामा आएकी छिन् । वास्तवमा फातिमाले सोशल मीडियामा आफ्नो एक फोटो शेयर गरेकी थिइन् । जसमा फातिमाको दायाँ तर्फको आईब्रो हल्का काटिएको छ । जसलाई लिएर […]
यसकारण यी ब्यूटी क्वीनले ‘मिस अरब वर्ल्ड’ बाट आफ्नो नाम फिर्ता लिईन्!
एजेन्सी, साउदी अरबको एक मुस्लिम ब्यूटी क्वीनले ‘मिस अरब वर्ल्ड’ बाट आफ्नो नाम फिर्ता लिएकी छिन् । यी मुस्लिम ब्यूटी क्वीनलाई ‘मिस अरब वर्ल्ड’ मा भाग लिएको हुनाले उनि माथि अनलाइन ट्रोल गरिनुको साथै उनलाई धम्की पनि दिईयो । उनले यसै कारणले गर्दा ‘मिस अरब वर्ल्ड’ प्रतियोगिताबाट आफ्नो नाम फिर्ता लिएकी छिन् । इजिप्टमा ‘मिस अरब वर्ल्ड’ नामको […]
यस सेल्फी कै कारण देश छोड्नुपर्यो मिस इराक साराले !
करोडौ कमाउने यी चर्चित ५ नायिकाहरु बस्छन् भाडाको घरमा!
अमिताभ बच्चनलाई लाग्यो ठुलो झट्का: ९ सेकेन्डमा डुब्यो यति करोड!
आजको दिन तपाईको कस्तो रहला? हेर्नुहोस आजको राशिफल
2017 BigulNews | Eggnews by Theme Egg.